Free Forex VPS | Forex Trading Zvakanaka Private Server
musha / Forex Offers / Forex Inopa Kukurukura / Free VPS
PaFXCC tinopa vashandi vedu kukwanisa uye nzvimbo yekutengeserana achishandisa VPS (virtual server server). Pane zvinhu zvitatu zvakakosha zvakakosha pakushandisa VPS kufambira mberi kwekutengeserana kwekuita; kukurumidza, kuchengeteka uye kugoneka. Heino mutsara muchidimbu chega roga.
FXCC inopa VPS kubata senzira inodhura zvikuru uye inogadziriswa nzira yakasiyana yekuona kushamwaridzana kunowanikwa pedyo zvikuru nekuwanika kunowanikwa kwekutengesa zvidzidzo. Kununura latency yakadzika uye zvichida kuvimbisa kukurumidza kufambidzana pakati: vatengesi, mapurisa makuru mavatengesi nemashandisirwo emari zvakadai seECN's FXCC, zvinoguma nekuvandudzika kwekutengeserana kwekutengeserana.
Chero kutengeserana (uye kuburikidza) MetaTrader, kana kushandisa advanced bespoke backend nekutengesa purogiramu, kuchengeteka chinhu chakakosha chekutengesa kushandiswa kweVPS. Pane zvakajeka zvakagadzirwa nhaka uye kuvandudzwa kunogadzirwa nekukanda mapurosoft software kune imwe nzvimbo yega yega uye mawindo eWindows 'Server VPS anoramba achivandudzwa kuitira kuchengetedza mashuva maviri nevashandisi kubva kune vamwe nevanopisidzira. Mukutaura kwehudhireti yemuviri, kunyatsotarisirwa kunotorwa kunodzivirira kukanganisa kunokosha. Yakachengetwa sevhareji uye nheyo dzenhare dzenhepfenyuro dzinoongororwa 24 / 7 pamusoro pehutano uye dzinotungamirirwa zvakasimba 24 / 7 pamwe chete nekambani yekutsigira maqembu.
Kuva newaini yako yakatsaurirwa kuti utange matanho ako ekutengesa, anobatsira kuve nekushanda kwakanaka kwekutengesa kwako. Kana, semuenzaniso, iwe wakanga uchitamba webhusaiti yako yekutengesa kubva kumba, haugoni kuitora pamakombiyuta ako epamba, zvisinei nekukurumidza kungave uye zvisinei nekukurumidza fiber optic yako hurukuro yekutengesa ingave. Iwe unogona kuibata pane imwe nzvimbo yakatsaurirwa, iyo vatengi vako vanogona kuraira zvigadzirwa zvako nokukurumidza uye zvinobudirira sezvinobvira, sekuchengeteka sezvinobvira uye kusvika kune misika yako makumi maviri nemana nemazuva. Musika wako haugone kupfiga apo iwe unodzima kombiyuta yako kumba uye broadband usiku humwe. Ndiyo mamiriro ezvinhu akafanana kusvika pakuwanikidzwa kana kutengesa; kana vachimhanya nemaitiro mapurogiramu ivo vanofanira kutengesa 24-7, iyo server / s nguva dzose inoda kugadziriswa uye yakatsaurirwa kune imwe yako yekushumira, kushambadzira.
Zvishandiso uye zvigadziro zvinowanzovakwa kune yese yeVPS service, yakadai se Remote Desktop access iyo inobvumira vashandisi kuti vanyatsobatanidza kune avo vakazvitsaurira server - VPS kubva kupi zvako, pasina kuiswa kwekuwedzera, kana kuti zvigadziriro zvinodiwa. Vatengesi vanogona kusvika kunekutengesa mapurisa kubva kumajoni akasiyana-siyana: PC, laptops, mahwendefa, uye mafoni, pasina kushungurudza software iri kushanda paVPS. Kushandisa VPS multiple platforms uye multiple accounts zvinogona kuiswa paVPS imwechete, kupa vashandi kusvikirwa, kuitira kuti vashandisi vakawanda vatarise pakombiyoni panguva imwe chete, inogona kuendeswa kunzvimbo dzakasiyana.
Kuti uise kuVPS yako yekusununguka, ingopinda kune Vatengesi Hub, verenga Terms & Conditions uye ita chikumbiro chako.
Tora VPS yedu